INew Belkin kunye neIncase Isikhumba kunye neMitya yeNylon yeApple Watch | Ndisuka mac
Uninzi lwabavelisi abaye baqonda ukuba umhlaba ojikeleze iApple Watch uya usiba ngokubaluleka ngakumbi kwaye nokwenza into eya kufikelela kuyo iya kukhokelela kwintengiso ekhuselekileyo. Yiloo nto ke iingxilimbela ezimbini zeefowuni zeselfowuni ziye zacinga U-Belkin no-Incase ababhengeze ukufika kwemitya emibini ye-Apple Watch eyenziwe ngeyiloni kunye nesikhumba.
Le yimitya emitsha enoyilo olunxaxhileyo kunye nezinto eziyimpumelelo kakhulu eziza kwenza ukuba iApple Watch yakho ijongeke intle. Sithetha ngemitya eyenziwe ngenayiloni kunye nofele.
I-Incase brand yenze i-12 yeemodeli zentsimbi ezintsha eziza kukuvumela ukuba unxibe iwotshi entsha ngokukwazi ukutshintsha umtya amaxesha amaninzi njengoko ufuna. Uye wacinga kwakhona imitya yenylon yeApple kwaye ubanikile ubuchule bayo obukhethekileyo. Inkampani yeBelkin yenxalenye yayo ijolise kwiimodeli ezininzi zomtya owenziwe ngesikhumba sokwenyani.
Ngokwamaxabiso, Incase imitya yenylon iindleko ezijikeleze i- € 36, ixabiso elisezantsi kancinci kunaleyo iApple ngokwayo ibeke imitya yayo eyenziwe ngezinto ezifanayo. Imitya kaBelkin emnyama, engwevu kunye emdaka, okwangoku, inexabiso le- € 79,95 kwaye zombini iinkampani ziye zacinga ngeemodeli ezingama-38 mm kunye ne-42 mm, ke nokuba yeyiphi na iwotshi yakho onokufumana enye yezi ndlela.
1 IBelkin Belt
2 Incase iBelt
Yenzelwe ukulingana izihlahla ezininzi.
Custom bopha enemingxuma bopha.
Umtya onobunzima obuyi-3mm.
Ifumaneka ngemibala emithathu.
Ngobukhulu obubini: i-38mm kunye ne-42mm ye-Apple Watch.
Ukuhambelana: Apple Watch 42mm Series 1 and 2.
Isixhobo: Inayiloni elula kwaye yomelele.
Iinkcukacha: bopha steel stainless.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » INew Belkin kunye neIncase Isikhumba kunye neMitya yeNylon yeApple Watch
Kuphela yi-iMac kunye neMac mini (ngo-2014) ezakhutshwa ngo-Okthobha